Ahoana ny Hanampiana ireo Niharam-Boinan’ny Fihovitrovitry ny Tany tao Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Aogositra 2017 12:34 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey 2006 no nivoaka ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Ahitana fanangonam-baovao mahaliana tanteraka momba ny horohorontany nalaina tao amin'ny Yahoo, Newsvine (amin'ny teny Anglisy) sy Help Jogja (amin'ny teny Bahasa Indonesia), izay manome fahafaham-po ho an'ny olona rehetra manerantany mitady vaovao farany momba ny loza voajanahary ihany koa ny bilaogy Indonesia Help, bilaogy napetrak'ilay bilaogera monina ao Yogyakarta vao haingana, anisan'ny ravan'ny horohorontany ihany koa ny tranon'ity bilaogera ity.
Manoro hevitra mikasika izay karazana sampan-draharahan'ny ezaka fanampiana afaka ifandraisanao i Unspun raha sendra sahirana momba ny fitokisana azy ireo ianao:
Isaky ny misy loza voajanahary, indraindray sarotra ny mahalala izay fikambanana tsy miankina azonao atokisana mba hanomezana fanampiana. Raha anisan'izany ianao, dia manatòna ny HOPE worldwide. Miara-miasa amin'ny HOPE amin'ny tetikasa maromaro ny biraoko sy ny mpanjifako, Citigroup Indonezia, anisan'izany tetikasa izany ny ezaka Fanarenana sy Fanamboarana tao Aceh ary nahita ny HOPE azo antoka, mahomby sy mandaitra aho. … Raha afaka manampy ianao, dia ataovy azafady.
Ho an'ireo Indoneziana ao Indonezia te-hanaraka ny torohevitr'i Unspun, afaka mifandray amin'ny HOPE Indonesia ianao.